Kitra – Fifanintsanana “Can 2022”: ho fantatra anio izay mpilalao handrafitra ny Barea | NewsMada
Kitra – Fifanintsanana “Can 2022”: ho fantatra anio izay mpilalao handrafitra ny Barea
Par Taratra sur 03/03/2021
Hanamarika ity andro ity ny fanomezan’i Nicolas Dupuis, ny anaran’ireo mpilalao handrafitra ny Barea de Madagascar, hiatrika ny fihaonana amin’i Etiopia sy i Niger, hiadian-toerana ho an’ny “Can 2022”.
Andrasan’ny rehetra fatratra, indrindra fa ireo mpankafy ny baolina kitra, amin’ity alarobia 3 marsa ity ny fanoloran’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar ny anaran’ireo mpilalao handrafitra ny ekipam-pirenena. Araka ny fantatra, hisy ireo mpilalao vaovao hantsoina. Ankoatra izay, efa fampanantenana nataon’i Nicolas Dupuis, ny hiantsoana mpilalao avy eto an-toerana, ka miisa dimy eo izy ireo.
Hatreto, mampametra-panontaniana ny rehetra ny amin’ireo mpilalao maratra, izay tsy azo ianteherana ny ho fiverenany ao anaty ekipa dia i Jeremy Morel sy i Thomas Fontaine, izay samy vodilaharana ary i Bolida, irakiraka mpanafika. Ankoatra izay, eo koa ireo tsy mbola manana klioba hilalaovana ka tsy ampy fihaonana, toa an’i Dax sy i Melvin ary i Njiva. Izy telo mirahalahy ireo, izay efa nandrafitra ny Barea de Madagascar, nandritra ny “Can 2019”, notanterahina tany Egypta.
Manoloana ireo tranga rehetra ireo, azo heverina ny mety ho fiverenan’i Mamy Gervais, izay ao anatin’ny tanjany tanteraka ankehitriny ary anisan’ireo vodilaharana mahay atsy La Réunion, amin’izao fotoana izao. Eo koa i Toavina (Debakely), izay efa ampy traikefa tsara.
Betsaka ireo anarana mpilalao, voatonontonona any anaty tambajotran-tserasera, fa ho antsoin’ny mpanazatra malagasy, toa an’i Kenji Van Boto, vodilaharan’ny AJ Auxerre sy i Andy Pelmard, ao amin’ny OGC Nice ary ilay irakiraky ny Torino FC Italia, i Jean Fredi Grecco.
30 ireo mpilalao hantsoin’i Nicolas Dupuis, raha tsy misy ny fiovana. Tsiahivina fa ny asabotsy 27 marsa ny lalao hifandonana amin’i Etiopia, hatao any Addis-Abeba ary ny talata 30 marsa, amin’i Niger, eto Madagasikara.
La politique en bref 21/04/2021
Lutte contre le Covid-19: la France se prépare à la vaccination de ses ressortissants 21/04/2021
Le moral au top 21/04/2021